Indlela ngempumelelo ukhethe isidlaliso "Twitter"?
Ngo inqubo yentuthuko Inthanethi yaqala ukubonakala amathuba abaningi for yokuzibeka. Futhi lokho ingasaphathwa yokuthi ukuze ngempumelelo asebenzayo inethiwekhi, kuyadingeka uphasise Kusaphazwa tinhlobo letehlukene izingodo sanoma yisiphi isisetshenziswa. Ukuze uyidlule le nqubo indinganiso umsebenzisi ukuziveza, kubalulekile ukusebenzisa okuthiwa nick (isidlaliso). Kodwa, ngeshwa, akubona bonke abantu atholakala ngokushesha futhi ngempumelelo beveza isidlaliso efanelekayo.
Isidlaliso ngoba "Twitter"
Cabangela izinkinga ngenhla Isibonelo omunye ethandwa kakhulu ngalesi sikhathi zokuxhumana okuthiwa "Twitter" (Twitter). Isidlaliso - oqale abasebenzisi bazobona, benaka okuthunyelwe kwakho. Yingakho kubalulekile ukuthi isiteketiso sakho ukuba "Twitter" kufanelana ngokuphelele isithombe sakho babukhanya esimnandi.
Kunezinhlobonhlobo zezindlela eziningi ngokudalwa yakhe isidlaliso. Ekhuphuka nge isidlaliso "Twitter", abantu bacasulwa izinto eziningi ezahlukene. Othile uzama ukwenza kube omuhle, ukuze sivuse abanye smile. Eziningi zazo okutshalwa kuwo izimali ezithile ezinkulu elisho asebentisa emagama ngendlela ethile elichaza ubuntu bazo. Kukhona futhi labo awuzami nokusungula izinto, futhi nje ukuhumusha igama lakhe. Kunezinto eziningi ezihlukahlukene izindlela, futhi ngayinye kuwo kudingeka siyinake.
Nicky ngoba "Twitter" sokuba namantombazane njalo
I ubulili bubuhle ngokuvamile abhekisela kukhethwa isidlaliso sakhe ezwela kunabantu. Emzamweni ukubonakalisa ubuhle kokubili zangaphandle nezwe lakhe elingaphakathi, abesifazane bavame ukuzihlanganisa ezinye izinto ezinhle, yimpumelelo kakhulu interweaving nabo izidlaliso yabo. It izidlaliso "Twitter" sokuba namantombazane njalo ababonakali ngezikhundla ngokuchichima razichnyh izimpawu elikulesi sihloko ukuthi zenzelwe ukuhlobisa ingxenye okubonakalayo. izibonelo Obvious zihlanganisa, isibonelo, "ღღღ Ang ع λ❍ch ع K ღღღ" noma "* Miss KatastroFFa *".
I izidlaliso best "Twitter"
Ukuze ukwazi beveza isidlaliso cool, ezokwenza ezikufanelayo kakhulu futhi musa ibhekane kucutshungulwe amaningi, kufanele uxhume zonke nemicabango yabo.
Iningi labantu okungenani kanye empilweni babaziwa phakathi abangane babo akuyona igama lakho, isidlaliso kakhulu ngokomzwelo. Isidlaliso ngoba "Twitter" kungaba kuveza wangempela uhlamvu yakho uma ukucabangela iqiniso lokuthi izidlaliso Asizalwa esikhaleni nje futhi unamathele nathi ngokuqondile ngoba ngokunembile ibonisa ezithile izici zethu. Ngokwesibonelo, uma igama lakho Alex, kodwa eminyakeni esikoleni sami kuwe ngokuthi Alex, kungaba isibonelo esihle Alex uhlobo isidlaliso.
Baningi abantu, ikakhulukazi isizukulwane esisha nentshisekelo cinema, umculo, izincwadi noma imifanekiso. Ngenxa yalokhu, kaningi kakhulu kubasebenzisi "Twitter" e izidlaliso yabo ukuzihlanganisa izinhlamvu abawuthandayo kusukela imikhiqizo ehlukahlukene kwamasiko ( "Pokemon", "Dostoevsky" nokunye. D.).
Abanye abasebenzisi ezihlukahlukene imithombo, ukuziqambela izidlaliso yabo ngokusebenzisa amathuluzi third-party. Ngakho isidlaliso "Twitter" kungadalwa nalobo ukusetshenziswa generator. Ngaphansi kwalesi sigaba uwela eziningana sites ezikhethekile, okuyinto ngezikhathi ezikhethiwe suiting isiteketiso sakho ngesisekelo izimfuneko ezithile, ukhululekile ukuba acele. Ngokwesibonelo, ukuhlola nge isidlaliso generator 6 izincwadi, uthome incwadi "A" khona manjalo ukhiqiza okufanayo "Aqanda", ukuthi ngalokwanele sifana igama elithile lase-Afrika. Mhlawumbe lena kuyithuluzi eliphumelela kakhulu nge kogotorogo ungakwazi yini ukubhala imigomo izidlaliso epholile "Twitter".
Izindlela beveza isidlaliso ngokwayo, okuyinto esikhathini esizayo eyokusiza ngesikhathi ukubhalisa esizindeni, isixuku esikhulu, inqobo nje umphumela ngokuyinhloko uyajabula nje wena.
Imininingwane kubasebenzisi zokuxhumana: wazi kanjani ababhala 'ka- izimpendulo "
Recipe zikaphayini uju Izigaxa